गोला प्रक्रियाबाट इजलास गठन गर्ने मिति तोक्न बिहीबार फुलकोर्ट बस्ने- समाचार - कान्तिपुर समाचार
न्यायिक क्षेत्रलाई क्यान्सर भएको छ, अप्रेसन र किमोको आवश्यकता छ : ओली
काठमाडौँ — एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले न्यायिक क्षेत्रलाई क्यान्सर भएको बताउँदै त्यसलाई जरैदेखि फ्याँक्नुपर्ने बताएका छन् ।बुधबार काठमाडौंमा आयोजित एमाले निकट युवा संघको साइबर सर्कल उद्घाटन कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले न्यायिक क्षेत्रमा भइरहेको विवादलाई 'क्यान्सर'को संज्ञा दिएका हुन् ।
काठमाडौंमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा उनले सत्तारुढ गठबन्धनको कारण सर्वोच्च अदालतमा विवाद भइरहेको पनि आरोप लगाए ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा जारी विवादबारे ओलीले भने, 'न्यायिक क्षेत्रमा क्यान्सर भइसकेको छ । न्यायाधीश, बारले भनिरहेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता, कानुन व्यवसायी, जनता छक्क परिरहेको छ । क्यान्सरको उपचार धामी बोलाएर दुबोको मुन्टा, कुखुराको अण्डा ल्याएर यसो यसो पारेर दुनामा लगेर मन्साउने ?'
सामान्य रूपमा सर्वोच्च अदालतको विवाद साम्य नहुने ओलीको भनाइ थियो । 'त्यो विचरा अण्डा मन्साएर, अण्डा पर लगेर राखेर क्यान्सर निको हुन्छ ? अप्रेसनको आवश्यकता छ । किमोको आवश्कयता छ । बिमार त्यो तहको छ,' उनले भने ।
सर्वोच्च अदालतमा जारी विवाद आफ्नो नेतृत्वको सरकारतिर फ्याँकिएको ब्रह्मास्त्र फर्किएर भएको ओलीको भनाइ छ । उनले पाँच दलको कारण सर्वोच्चमा विवाद जारी रहेको बताए ।
अहिले मुलुकमा आन्दोलन नभएको तर सर्वोच्च अदालतमा आन्दोलन भइरहेको ओलीको भनाइ थियो । 'अहिले देशमा आन्दोलन छैन । सर्वोच्च अदालतको आँगनमा मात्रै आन्दोलन छ । जनता छक्क परिरहेको छ,' उनले भने, 'यो पाँच दलको कानुनी क्षेत्रको प्रकटीकरण मात्रै हो ।'
प्रकाशित : मंसिर ८, २०७८ १६:५९